Waa maxay faraqa u dhexeeya QC, PD iyo SCP? Ma mid caalami ah baa?
Maalmahan, waxaa jira xalal dhaqso kaladuwan oo dhaqso loogu dallaco taleefannada casriga ah ee suuqa. Badhitaannada taleefanka gacanta ee awoodda badan ayaa si sax ah u keenaya xawaaraha lacag-bixinta ee taleefannada gacanta. Dhanka kale, borotokoollada lacag -bixinta ee deg -degga ah ee kala duwan oo ay soo saareyaasha kaladuwan ay sidoo kale horseedaan arrinta kala -duwanaanshaha betwe ...
Waa Maxay USB-C? Interface Waa Maxay Farqiga U Dhexeeya USB-C Iyo Interface USB?
Waa maxay interface-ka USB-C? Magaca buuxa ee interface USB-C waa USB Type-C, kaas oo ah jiilka xiga ee USB 3.0 interface. Waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ah naqshad caato ah, xawaare gudbineed oo degdeg ah (ilaa 10Gbps), gudbinta awood xoog leh (illaa 100W), iyo USB-C inte ...
Isagoo wajahaya Saamaynta Covid-19, Fursadda iyo Caqabadaha Wada-noolaanshaha
Guangzhou BWOO Electronic Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyadeed oo cusub. Badeecadeedu waxay dabooshaa qalabka elektaroonigga ah ee macaamiisha sida fiilooyinka xogta, xeedho, awoodda moobiilka, kuwa haysta taleefanka gacanta, iwm, badeecadaha BWOO ayaa loo dhoofiyay in ka badan 80 dal iyo gobollo. Muddo dheer ...